Rwanda kwere nkwa: Ọnọdụ nchekwa maka nzukọ CHOGM
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Rwanda » Rwanda kwere nkwa: Ọnọdụ nchekwa maka nzukọ CHOGM
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nzukọ CHOGM site na 2018
Edere ya na Eprel 2018, nzukọ ndị isi nke Gọọmentị (CHOGM) ka etiti afọ 2020 mgbe ntiwapụ nke ọrịa COVID-19 malitere na 2019, ma ugbu a, emegharịrị ọzọ maka June nke afọ a.
Site na imeziwanye ahụike zuru ụwa ọnụ na mbara igwe, a ga-eme Nzukọ Ọchịchị CHOGM n'oge okpomọkụ a.
Mịnịsta mba ofesi Rwanda gbara mbọ ịnabata mmemme a na Kigali site na June 25-26.
E mekwara gburugburu ebe nchekwa maka ndị otu na ndị sonyere ya site na mịnịstrị ahụ.
Rwanda ga-akwado ọgbakọ ndị isi Ọchịchị Commonwealth na-abịanụ (CHOGM) Summit n'okpuru ọnọdụ nchekwa n'etiti afọ a mgbe ọnọdụ ahụike ụwa zuru oke n'ime ọnwa ndị na-abịanụ.
Mịnịsta okwu mba ofesi nke Rwanda, Dr. Vincent Biruta, kwuru na mbido ọnwa a na obodo ya ga-anabata ndị ọbịa Nzukọ ahụ na isi obodo ya bụ Kigali site na June 25 ruo 26 nke afọ a dabere na mmelite nke ọnọdụ ahụike gburugburu ụwa.
O mesiri ndị otu Commonwealth obi ike, ndị sonyere, na ndị mmekọ ndị ọzọ nke ịdị njikere Rwanda ịnabata ndị isi Ọchịchị Commonwealth na-abịanụ n'ime gburugburu nchekwa.
E degharịrị nzukọ ahụ site na etiti 2020 mgbe ntiwapụ nke ọrịa COVID-19 malitere.
N'ozi mgbasa ozi ya na mbipụta ọgbara ọhụrụ nke Commonwealth Voices Magazine nke e bipụtara n'ọnwa a, Biruta kwuru na ka ụwa na-ele anya n'ihu na nchekwube maka mmụba nke ọnọdụ ahụike zuru ụwa ọnụ n'ime ọnwa ole na ole na-esote, Rwanda na-ele anya ịnabata ndị otu ibe ya. kwuru na Nzukọ CHOGM.
O gosiputara nzaghachi mba COVID-19 nke mba Rwanda na-ekwu na ọ gbadoro anya na mmekorita ọtụtụ ngalaba wee wuo ya na nzaghachi mpaghara na nke ụwa.
"Ka anyị na-aga n'ihu na-ewusi ikike anyị ike, nwee obi ike na anyị ga-anabata gị na gburugburu ebe obibi dị mma n'ihe gbasara ndụmọdụ Healthtù Ahụ Ike Worldwa niile," ka o kwuru.
O toro "nzaghachi ngwa ngwa nke mba ụwa na mberede ahụike ọha na eze ugbu a," na-ezo aka na ya dị ka ihe atụ na "mgbe anyị jikọtara mgbalị anyị, anyị nwere ikike ịkwadebe maka iyi egwu n'ọdịnihu kamakwa ime ihe ndị dị adị."
Banyere ọgwụ mgbochi COVID-19, Biruta kwuru na Commonwealth nwere ike ịrụ oke ọrụ n'ịhụ na nnweta nnabata na nkesa ọgwụ mgbochi dị oke ọnụ, na-eji ahụmịhe ya dịka onye ndu na gburugburu ebe obibi na mgbanwe ihu igwe nke na-aga n'ihu na-emetụta obodo gburugburu ụwa.
Nzukọ CHOGM na-abịanụ na Rwanda ga-anọ n'okpuru isiokwu bụ "elinyefe ọdịnihu nkịtị: Ijikọ, Innovating, Transforming" ma ga-elele ohere maka ndị isi nke Commonwealth iji tụgharịa uche n'ụdị ọhụụ ọhụrụ nke ọchịchị ụwa ma na-ebulitekwa ebumnuche na mkpebi ndị bụ isi emere n'oge CHOGM 2018 emere na London.
Ọ ga-abụ oge iji wuo ọnọdụ dị n'otu tupu isi mmemme ndị na-abịanụ, gụnyere nke 26th UN Conference Change Conference of the Parties (COP26) nke emere maka mbido Nọvemba 2021 na Glasgow na United Kingdom.
Bitura kwuru, "Ọ bụ n'ezie oge iji tinye okwu anyị n'ọrụ site n'ime ka ụdị ọchịchị anyị jikọtara ọnụ, na-eme ka usoro ahụike anyị dịwanye mma, ma hụ na akụnụba anyị na azụmaahịa anyị ga-enweta uto na-adigide," Bitura kwuru.
Ihe ndi ozo ekwuru n'oge nzuko CHOGM bu ime ka usoro nchedo ndi mmadu sie ike, ime ihe n'adighi nma na ihu igwe, na imeghe uru nke teknụzụ maka mmepe, Biruta kwukwara.
Nzukọ CHOGM bụ nzukọ kwa afọ nke ndị isi si mba Commonwealth niile, obodo ndị Britain gara aga, na ndị otu ọhụụ si na Britain.
Rwanda bụ onye nke ọdụdụ nke Commonwealth, sonyeere klọb na 2009 mgbe ọ na-eguzo dịka otu n'ime mba ole na ole na-enweghị njikọ njikọ ọchịchị Britain ọ bụla ma ọ bụ njikọ iwu obodo.
Commonwealth of Nations, nke a na-akpọkarị Commonwealth, bụ njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ndị otu, ọtụtụ n'ime ha bụ mpaghara nke Alaeze Ukwu Britain. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke ndụ ya, Commonwealth of Nations meghere ọnụ ụzọ ya maka mba ndị ọhụrụ site na mbụ Alaeze Ukwu Britain ịbanye.
Mba iri ise na atọ so na Commonwealth nwere nzukọ CHOGM ikpeazụ ha na Windsor Castle na London site na Eprel 16-20, 2018, na oku mmesapụ aka nke Her Majesty Queen of England.
Isiokwu nke nzukọ London CHOGM bụ "N'ebe ọdịnihu anyị nọ" bụkwa nke jikọtara ya na isiokwu 2018 iji mee ncheta ụbọchị Commonwealth.
Rwanda ugbu a bu ndi njem nleta n'Africa na-eto ngwa ngwa, na-eleba anya na nzuko na mgbakọ mba uwa na mba uwa. Site na ikike ịnabata mmadụ 5,500, thelọ Mgbakọ Kigali bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ogbako na East Africa.
Site na ụlọ ọrụ a site na mba ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ, Rwanda nwere ike ịnabata ndị ọbịa 3,000 maka CHOGM 2021, akụkọ si Kigali kwuru.
Rwanda na-eguzo ebe ndị njem nleta mara mma ma na-adọrọ adọrọ, na-asọ mpi na njem ndị Africa.
Gorilla trekking safaris, ọdịbendị bara ụba nke ndị Rwandese, ọmarịcha, na gburugburu ebe obibi ndị enyi na enyi na-eme njem nleta niile na-adọta ndị njem nleta na ụlọ ọrụ ntinye ego nke ndị njem si n'akụkụ ụwa niile ịga leta na itinye ego na njem njem ndị a nke Africa.